कर्डोबा - यसको सबैभन्दा सुन्दर र प्रतीकात्मक स्थानहरू पत्ता लगाउनुहोस् Absolut यात्रा
कोर्डोबा स्पेनको अन्डालुसियाको एउटा शहर र प्रान्त हो। यो सियरा मुरैनाको फेदमा छ र अन्डालुसियाका अधिकांश बासिन्दाहरूसहित तेस्रो शहर भएको छ। यो ई.पू. दोस्रो शताब्दीमा स्थापना भएको हो र यसका सम्पूर्ण ईतिहासलाई संक्षिप्त रूपमा धेरै कुनामाहरू छन्। अनिवार्य स्टप भन्दा पहिलो पहिलो मध्ये एक यसको मस्जिद-क्याथेड्रलमा हो। जहाँ विभिन्न शैलीहरू जस्तै मुदेजर, गोथिक वा रेनेसान्स मर्ज।
अर्को पैदल यात्रा हामी शहरबाट करीव kilometers किलोमिटर मात्र रहेको मेदिना अज़हाराको पुरातात्विक साइटमा लैजानेछौं। Alcázar de लॉस रेज Católicos बगैंचा क्षेत्र को रूप मा, महान सुन्दरता को एक गढ हो। यदि तपाईं एक राम्रो छवि चाहनुहुन्छ भने, यसको रोमन ब्रिजबाट हिंड्न नबिर्सनुहोस्।
त्यस्तै, अर्को सबैभन्दा विशेष क्षेत्रहरू ला प्लाजा डे ला कोरेडेरा हो। बार र रेष्टुरेन्टहरूको विशाल बहुमत त्यहाँ केन्द्रित छ। निस्सन्देह, यदि हामीले वर्गहरूको उल्लेख गर्यौं भने क्यापुचिन वर्ग ल्यान्टन्सको क्रिष्टसँग धेरै पछाडि हुँदैन। यदि तपाईं संकरा सडकहरूको वरपरको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले यहूदी क्वार्टरमा जानुपर्नेछ र त्यसमा क्यालेजा डे लास फ्लोरस जानुहोस्। पर्खालबाट एक कदम, टोर्रे डे कलहोर्रा वा पालासियो डे भियाना कर्डोबामा अन्य मुख्य बुँदाहरू हुन्।
यदि त्यहाँ एक सद्गुण छ कि स्पेन को विशेषता, यो विविधता र यसको सेटिंग्स को विपरीत हो। हामी यसमा स्की गर्न सक्छौं ...
द्वारा निरपेक्ष कर्डोबा बनाउँछ4वर्ष .
Cordovan राजधानी को उच्च-अन्त होटलहरु को नयाँ श्रृंखला को श्रृंखला संग श्रृंखला उत्सव तयारी गर्दै ...